Terra Incognita Hoan’ireo Mpisera Google Chrome · Global Voices teny Malagasy
Terra Incognita Hoan'ireo Mpisera Google Chrome
Voadika ny 13 Jona 2014 9:09 GMT
Pikantsary tao amin'ny habaky ny Terra Incognita.
Seranam-piaramanidina natao fahirano tao Pakistana. Fihetsiketsehana tao Venezoela. Tovovavy nalaina an-keriny tao Nizeria.
Diso fanantenana amin'ireo fantim-baovao milaza ny tokotaniben'ireo toerana ireo ve ianao, noho ny karazam-baovao sarotra atokisana? Ahoana indray raha afaka miditra mora foana amin'ny vaovao azo antoka, mampiala-voly na mamely ireo fitsaratsarana an-tendrony momba ireo toerana ireo tsy mila mampakatra ny isan'ny mpamaky matetika?
Ny Terra Incognita: 1000 Cities of the World ( Tany tsy fantatra: Tanandehibe 1000 eto amin'izao tontolo izao) dia natokana hoan'ny mpiseran'ny Google Chrome rehetra “hananganana ny fahaiza-mahita ny zavatra tsy nokarohina”, mba hijerena fijery voalanjalanja, ivelan'ny tontolon'ny vaovao mahazatra ny besinimaro, miresaka tanàna 1000 eto amin'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny fitrohana (na fisintonana) ny Chrome extension maimaim-poana avy amin'ny Chrome Web store.
Avy ao amin'ny habaky ny Terra Incognita:
Whereas many recommendation systems connect you on the basis of “similarity”, Terra Incognita connects you to global news on the basis of serendipity. Each time you open the application, Terra Incognita shows you a city that you have not yet read about and gives you options for reading about it. Chelyabinsk (Russia), Hiroshima (Japan), Hagåtña (Guam) and Dhaka (Bangladesh) are a few of the places where you might end up.
Satria marobe ireo rafitra toro-hevitra mampifandray anao amin'ny fototry ny “fitoviana”, mampifandray anao amin'ny vaovao manerantany amin'ny alalan'ny fahaiza-mikaroka zava-tsy hita ny Terra Incognita. Isaky ny manokatra ny fampiharana ianao, mampiseho anao tanàna mbola tsy novakianao ny momba izany ny Terra Incognita ary manome safidy anao amin'ny famakiana izany. Chelyabinsk (Rosia), Hiroshima (Japana), Hagåtña (Guam) sy Dhaka (Bangladesh) no anisan'ireo tanàna vitsy mety hofarananao.
Rehefa avy mitroka ny “extension” [fanitarana] maimai-poana ianao, dia afaka mandefa azy amin'ny alalan'ny fitendrena ny bokotra Terra Incognita ao amin'ny zoro fametrahanao adiresy, izay mangataka indray mandeha ny teny miafin'ny adiresy imailakanao. Mila manasonia faneken'ny mpisera hanaovana fanadihadiam-pianarana ianao ary mamaly ireo fanontaniana fanadihadiana fohy efa voadinika mialoha (iray minitra monja no ho lany), alohan'ny ahafahanao mitetitety ny Terra Incognita.
Terra Incognita dia tetikasan'ny Foibe hoan'ny Media Mampandray andraikitra ny Olom-pirenena ao amin'ny MIT. Tetikasa natsangan'i Catherine D'Ignazio niaraka tamin'i Matt Stempeck sy Ethan Zuckerman (iray amin'ireo mpiara-manorina of GV!).
Hoan'ireo olona tsy zatra ny atao hoe “fanitarana”, manitatra ny fiasan'ny Google Chrome sy ireo habaka lasa hita ao aminy izy ireny. Ohatra, mipoitra eo amin'ny Google Chrome ity fanitarana ity amin'ny alalan'ny fanampiana bokotra vaovao eo amin'ny zoro fanoratana adiresy. Raha oharina amin'ny fampiharana, dia ny fanitarana no sahaza ny fampiharan'ny haba-tranonkala sy ny aterineto.
Tantaran'ny Hevitra farany
Karaiba 2 herinandro izay
Mpiangaly rap maneho hatezerana sy fanoherana amin'ny fitondrana miaramila
Azia Atsinanana 18 Desambra 2021
Azia Atsinanana 16 Novambra 2021